"आँखीझ्यालभित्र"बाट मणिपुर नियाल्दा | साहित्यपोस्ट
हर्कबहादुर लामगादे ‘रोहित’ (मणिपुर) प्रकाशित २९ चैत्र २०७७ ०८:०१
निबन्ध लेखनमा परिपक्वता हुनुभएकी मणिपुरवासी भवानी अधिकारी (अध्यक्ष, नेपाली साहित्य परिषद् मणिपुर)द्वारा रचित आँखीझ्यालभित्र मणिपुर, निबन्धसङ्ग्रह पाठ गर्ने मौका पाएँ । उहाँको यो पुस्तक पढेर प्रतिक्रिया नलेखी मनले मानेन । उहाँ आलेख एवं निबन्धलेखनमा निपुणता अर्जित गरेर नेपाली साहित्यजगत्लाई आफ्नो योगदान पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ । मेरो बौद्धिक क्षमतामा प्रतिक्रिया दिने परिपक्वता न भएता पनि मनमा उब्जिएका केही कुराहरू कोर्ने दुःसाहस गर्दैछु ।
हुन त म पनि मणिपुर भूमिमा जन्म लिएको एक भारतीय नागरिक हुँ । यो पुस्तक पढ्नु अघि म मणिपुरमा बसोबासो गर्ने गोर्खाली समाजबारे केही सामान्य ज्ञान राख्दछु भन्ने मिथ्यामा रहेछु । मेरो मिथ्यालाई यो पुस्तकले छर्लङ्ग पारिदियो । लेखकले नेपाली भाषी(गोर्खाली)को सन् 1826 बाट इतिहास सिर्जन भएको अंशहरूलाई सङ्क्षिप्त रूपमा समाहित गरेर पुस्तकको रूपमा पस्किनुभएको छ जसमा साहित्य, धर्म-संस्कृति र सामाजिक विकासलाई स्थान दिएको छैन भनेर भन्दा लेखकप्रति अन्याय हुन्छ ।
हर्कबहादुर लामगादे रोहित (मणिपुर)
भारतको प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले मणिपुरको सुन्दरता देखेर ‘ज्वेल अफ इन्डिया’ को उपनाम दिए । यस उद्धरणको वृतान्त परिचय ‘कौब्रुका शरणमा’ अध्यायमा पाइन्छ जसमा कौब्रुको हरियाली सुन्दरता साथै मणिपुरलाई नौँ डाँडाले घेरेको सौन्दर्यको कलात्मक ढङ्गले वर्णन गरिएको छ । वर्णन पढ्न लाग्दा पाठकलाई कौब्रु पहाडको दर्शन गरे जस्तो प्रतीत हुन्छ । मलाई चाहिँ भयो । पुस्तकमा कौब्रुको सुन्दरताको वर्णन साथ-साथै लेखकले धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुलाई पनि बलियो ढङ्गले मुठारेका छन् र कौब्रुको वरिपरी फेदमा बस्ने गोर्खाली समाज साथै हिन्दूधर्मका अनुयायीको धार्मिक अस्थालाई दर्शाएका पनि छन् । कुनै धार्मिक कार्यक्रम गर्दा, पूजाकार्जे गर्दा कौब्रुबाबाको नाम उच्चारण एवं वन्दना गरिन्छ; विस्मय पोख्दा, बाचा-कसम खादा कौब्रुको नाम स्मरण गरिन्छ । कौब्रुको आशीर्वादले नै नेपाली भाषी आफ्नो धर्म-संस्कृति एवं विरासतलाई लिएर जीवन यापन गर्दै छन् भन्ने लेखक आत्मविश्वासका साथ भन्नुहुन्छ । मणिपुरको सामाजिक औ जातिय समीकरण पनि जान्न पाइन्छ लेखकका कलमबाट । नेपाली भाषीको भौगोलिक बसोबासोलाई वर्णन गर्दै लेखकले मणिपुरको कुनाकाप्चामा भएका बस्तीलाई नछोडी लेखमा सुरक्षित स्थान दिनु भएको छ । गोर्खाली मृदुभाषी हुँदै यहाँका सम्पूर्ण समाजसँग सामान्जस्यपूर्वक बसेको महत्वलाई प्रकाश हाल्नुभएको पनि पढ्न पाइन्छ ।
मणिपुरमा गोर्खाली समाजले मनाउने एक चाडलाई पनि नछुट्टाईकन व्याख्या गरेको पढेँ । सबै चाडलाई एकै चोटि पाठन गर्दा देउसीभैली, तीजको रमझम, दसैँको खुसी, तिहारको प्रकाश, भाइटीकाको हर्षोल्लासले एकै चोटि मनमा पदार्पण गर्दछ । पश्चिमी सभ्याताले जति नै थिचोमिचो गरे पनि मणिपुरेली गोर्खाली धर्म, संस्कृति, चाडबाडलाई साँचेर राखेको सन्दर्भलाई लेखकका आत्मविश्वासी शब्दले बाँधेको छ ।
पाठकको रूपमा यो पनि जान्न पाएँ कि नेपाली साहित्यको इतिहासको उद्गमकाल सन् १९५६मा आषारानीको नेतृत्वमा ‘मणिपुर नेपाली साहित्य समिति’ को गठन गरेर नेपाली साहित्य विकासको श्रीगणेश भएको हो । त्यसपछि पनि साहित्य गतिशील भएको उल्लेख जान्न पाइन्छ । मणिपुरको सवाई-१८९३मा तुलाचन आलेले लेखेको सुरवाती क्रमलाई सम्झिँदै वर्तमानमा युवा कवि सकरज चापागाँईसम्मको मणिपुर साहित्य विकासको इतिहास पढ्दा सन्तुष्टिको सास स्वतः फेरिँदो रहेछ।
हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित' (मणिपुर) २२ चैत्र २०७७ १३:०१
मणिपुरमा गोर्खाली समाजको अस्तित्वमा प्रश्न आई रहन्छ र थोरै जनसङ्ख्यालाई थाहा होला कि मणिपुरको महाराज बुद्धचन्द्रको नेपालकी राजकुमारी ईश्वरी देवीसँग १८ जुन, सन् १९४१मा विवाह भएको थियो । ८ जुन १८९१ मा सहिद सुवेदार निरञ्जन सिंह क्षेत्रीले मणिपुर प्रदेशको रक्षार्थ फाँसीको फन्दालाई सहर्ष चुमेका थिए । यो गौरवतापूर्ण विरासत औ अस्तित्वबाट हामी सबै अनभिज्ञ छौँ । म पनि थिएँ तर यो पुस्तकले मेरो यो अन्धकारलाई पन्छाई दियो । यो सोधात्मक निबन्ध सबैका लागि मर्दै गरेको प्राणमा औषधिको रूपले काम गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
हामीले दैनिक जीवनमा भेटी राख्ने पं. बद्रीशरण खतिवडाको विशेषतालाई जानेको छैनौँ । उहाँले १६ विश्व शान्ति महायज्ञ र ४०० माथि पुराण वाचन गरेको एवं उहाँको धार्मिक जनजागरणमा पनि उत्कृष्ट योगदान मानेर मणिपुर सरकारदेखि लिएर मानव संसोधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार र अन्य सङ्गठनले पुरस्कृत गरेको सद्ज्ञान हामी जस्ता पाढकलाई कहाँ थाहा थिया र ! लेखकले पं. बद्रीशरण खतिवडामार्फत नेपाली भाषीले पाएका गौरवपूर्ण भूमिकालाई राखेर प्रशंसनीय कार्य गरेको म जस्तो सामान्य पाठकलाई लाग्यो ।
मणिपुरबाट गोर्खालीको अरू राज्य वा देशमा पलायन केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो गोर्खा जनजातिनिम्ति घातक सिद्ध हुँदैछ र यसरी नै चलिरह्यो भने परिणाम अझ घातक हुनेछ । यो पलायनदेखि लेखक अति कष्टमा परेको उहाँको वर्णनमा देखियो । यो समय सान्दर्भिक विषयले उदाहरणात्मक शैलीमा पाठकको मन छुन बाध्य पारेको छ । यो पलायन सम्बन्धी निबन्ध सबै मणिपुरको नेपाली भाषीले पढ्न अति आवश्यक छ । यस्ता लेखले मात्र सबैको मार्ग प्रष्ट गर्छ भन्ने मेरो विश्वासमा थप दृढता बढेको छ ।
यो निबन्ध सङ्ग्रह पढ्दा लेखकको कलात्मक ढङ्गले धेरैको मन छोएको छ । निबन्धमा कुनै पनि सानो भावनालाई/विषयलाई रोचक शैलीमा शब्द एवं भावलाई न दोहोर्‍याई विस्तार दिइएको पाइन्छ । चुनिएको विषयमा उठान पछि व्याख्या गर्दा व्यापकताको गहराईले पढ्नमा रुचि बढाउँछ । वर्तमान समयको दैनिक वार्तालापमा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रभुत्व अधिक मात्रामा बढेको छ । साहित्यिक भाषा एवं शब्द विलीन हुँदैछ । यो परिवेशमा लेखकले भाषा र वाक्य रचनामा साहित्यिक बास्ना दिएर हामी जस्ता सामान्य पाठकलाई जटिलताको अनुभव गराएका छन् । पाठकलाई नूतन शब्द जान्न बाध्य बनाएका छन् । लेखकले कुनै पनि विषयमा वर्णन गर्दा, विस्तार दिँदा, उदाहरण दिँदा मणिपुरलाई बिर्सिनु भएको छैन । उहाँको मणिपुरप्रतिको प्रेमभावना लेखमा छछल्किएको छ। लेखकका भावना धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वले रङ्गिएको थाहा पाइन्छ ।
आँखीझ्यालभित्र मणिपुर निबन्धसङ्ग्रह पढेर बौद्धिक विकास हुनु औ मणिपुरमा बस्ने गोर्खालीको इतिहाससँग परिचय पाउनु स्वभाविक छ । पुस्तकको उदेश्य पनि यही होला । आशा होइन पूर्ण विश्वास छ, यो पुस्तक समान आउने दिनमा पनि लेखक भवानी अधिकाकारीको गुणात्मक कृति पढ्ने अवसर पाइन्छ ।
हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित' (मणिपुर)
हर्कबहादुर लामगादे ‘रोहित’ (मणिपुर)1 लेखहरु9comments